Jenssen dia mampiseho ny atin'ny sambo Star Wars angano indrindra. Famoronana an-tserasera
Azo antoka fa ny ampahany amin'ny eritreritry ny mpankafy Star Wars dia nitranga indraindray ahoana no ho ao anatiny ireo sambo ireo ary ny fomba nananganana azy ireo hahafahan'izy ireo mandeha amin'ny hafainganam-pandehan'ny hazavana na hisoroka ny karazana fanafihana rehetra avy amin'ny fanjakana rehefa mihodina amin'ny fomba miavaka izy ireo amin'ny sarimihetsika sasany mahavariana indrindra amin'ny sasany amin'ireo sarimihetsika tamin'ity franchise angano ity.
Hans Jenssen dia niasa toy ny mpanao sary ara-teknika am-polony taona maro ary mampiseho ny firafitry ny fiara sy tranobe sarotra. Jenssen dia malaza amin'ny andiany Star Wars, izay anaovany replika an'ny TIE Fighter an'i Darth Vader, ny elatra X an'i Sky Skykerker, ary ny sasany amin'ireo sambo miavaka indrindra amin'ilay andian-tsarimihetsika noforonin'i George Lucas ary an'i Walt Disney ankehitriny.
Naharitra folo taona io asa io ary hitanao izany ny talenta sy ny teknika ilaina hanao ireo ampahany ireo izay mahaforona andian-dahatsoratra mahatalanjona.
Tsy mampino ihany koa ireo sanganasa kanto ireo vita tanana.
Es amin'ny tranokalanao manokana izay anehoany tsikelikely ny fizotran'ny famoronana. Voalohany, manoritsoritra ny sambo amin'ny pensilihazo amin'ny takelaka iray alohan'ny handokoany azy ireo isaky ny sosona ary mamorona tsiranoka sy fifanoherana miandalana.
Ny dingana iray manontolo, miorina amin'ny teknika nianarany tamin'ny taona 80, dia afaka maka 15 ora isan'andro.
Azavao izay misy lozika isaky ny sary mamorona rafitra na singa iray ho an'ny fiasan'ny fiara tsirairay ary mampifandray azy ireo amin'ny tariby, loharanom-pahefana, famatsiana, na izay mety ho fanerena.
Asa mahatalanjona fotsiny araka ny hitanao amin'ny sary zarainay eto. Manana ny tranokalany hanaraka ny asany sy ireo sisa tavela izay mahaforona an'ity andiany tsy mampino ity.
Raha te hahita ianao iray amin'ireo mpanazava ny Star Wars.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny sambo Star Wars malaza indrindra dia mampiseho amin'ny an-tsipiriany